Companylọ Ọrụ Nchebe - Olee otú Mmetụta Ndị uwe ojii si eyi Igwefoto - OMG Solutions
Security Company - Olee mmetụta bụ Police Isi yi ese foto
N'oge ahụ, ọ dị mgbe ndị ọrụ nchekwa ọha na-eji kamera eyi, mana n'oge ndị na-adịbeghị anya, a hụwo ọbụna ndị ọrụ nzuzo na nchekwa ka ha na-eji ụdị teknụzụ a. Ọtụtụ ndị ọrụ mmanye iwu na-amalite ịhụ igwefoto ahụ dịka ụzọ iji wulite ntụkwasị obi nke obodo, nye ihe akaebe nke enwere ike ikwenye ma jide ndị isi na-aza ajụjụ maka omume ha. Ugbu a ọtụtụ ngalaba ndị uwe ojii anakwerela nke a ma ọ na-aghọ ngwa ngwa iwu na steeti ụfọdụ. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, a ga-anabatakarị ya, ihe a kwenyere na atụ anya ya. A hụwo ọtụtụ ụlọ ọrụ nchekwa nzuzo ka ha were usoro a mana ọ na-egbu oge, gịnị kpatara ya? N’ezie, enweela nsogbu ndị siri ike n’ihe banyere mkpa na ego.
Akwụ ụgwọ ọsọ
Site na iji teknụzụ ọhụụ na-apụta, ọnụ ahịa nke ịnwe onye uwe ojii nwere igwefoto ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ adị ọnụ ala. Mana nke a, dịka eziokwu, ọ bụghị ihe na-adịghị mkpa, anyị na-ahụ na ike ndị nkịtị nwere ike ị nweta ego achọrọ maka ya site na ntinye gọọmentị na usoro ndị ọzọ mana nke a agaghị ekwe omume maka ndị ọrụ nchekwa. Ma dị ka anyị maara na ọnụ ahịa nke idobe ha ji nke nta nke nta buru ibu karịa tupu ị baa ụba karịa ọnụ ahịa nke inweta ha na mbụ. Nke a na - abụ oke nsogbu ma na - ewetara ọtụtụ nsogbu karịa mgbe anyị ga - arụ ọrụ maka ndozi yana nchekwa.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya n’ihe kpatara eji arụ ụlọ ọrụ nchekwa nkeonwe, anyị na-ahụ ya dịka azụmahịa ọ bụla ebe ebumnuche bụ mgbe niile na-enweta uru. Mgbe ndị nchekwa nchekwa nọdụrụ onwe ha jụọ onwe ha uru ole igwefoto a na-eyi n’ahụ dị, ọ na - amalite ịchọpụta na ọ naghị eweta oke ma ọ bụrụ na anaghị akwụ ụgwọ azụmahịa ha.
Ọzụzụ Pụrụ Iche
A na-aghota ya na igwefoto ndi mmadu nwere ike ịbụ ezigbo ihe nkuzi iji mee ka ndị na-eche nche dị mma n'ọrụ ha. Mana tupu inye ha igwefoto ka ha were mee, a ga-enwerịrị ọzụzụ pụrụ iche maka teknụzụ a. O zughị ezu inye onye ọrụ ọ bụla ma rịọ ka ha jiri ya mee, a ga-enwerịrị nghọta tupu enwere otu iwu dị iche iche ga-esite na iji ya. Nke a gụnyere akụkụ nzuzo, ọ dị ezigbo mkpa nzuzo anaghị emebi. Iwu dị iche iche eji (mgbe ịgbanye ma ọ bụ gbanyụọ) dị ezigbo mkpa n'agbanyeghị na ọ nwere ike na-ada ezigbo ntọala na enweghị isi. Ọ dịkwa mkpa ịgwa ndị mmadụ ka edekọtara ha, ọ dịkwa ezigbo mkpa ịkụziri ndị ọrụ nchekwa otu esi ebugo ma budata data na igwefoto. Ọzụzụ a niile ga - eweta ego ma ụlọ ọrụ nkeonwe anaghị ahụ isi ihe dị na ịme nke a, ha na - echekarị na ọ bụ ụzọ iji tinye ego na ihe adịghị oke mkpa. Ezighi ezi dịka o nwere ike ịdị mma, ụlọ ọrụ nkeonwe na-enyekarịrị ọzụzụ na agụmakwụkwọ bụ isi nke ọbụlagodi na-ekpuchi mba ahụ ma kwupụta iwu ndị ọrụ ha.
Nsogbu na Iwu
A na-agba akwụkwọ ọtụtụ ikpe megide ndị ọrụ nchekwa kwa afọ, site n'enyemaka nke ese foto ndị ahụ na-eyi. Ọ dị mfe idozi esemokwu ma dozie okwu ndị a na ihe ngosi vidiyo. Ndị ọrụ nchekwa onwe ha anaghị enwekwa ohere maka ndị ọrụ a ebe ọ bụ na ụdị ọrụ ha dị iche na nke onye ọrụ gọọmentị, ha enwetaghị akwụkwọ ikpe megide ha. A na-ahụ ya na ọnụ ọgụgụ ndị uwe ojii na-ejikarị oge ụfọdụ iji ike eme ihe. Banyere ndị uwe ojii nkeonwe, nyocha emere enwebeghị ike igosi na ha na-eji ike ma ọ bụ ndị mmadụ. Nke a bụ ihe kwere nghọta mgbe ha nwetasịrị eziokwu ahụ na ha anaghị ejide onye ọ bụla kwa ụbọchị ma ọ bụ nwee nyocha dị ka onye uweojii na-ahụ maka ọha na eze nwere. Nchebe nke onwe nwere usoro iwu "aka" nke na-egbochi ha ịmetụ onye ọ bụla aka. Site n'ụdị ihe omume nke nzuzo na-etinye aka, ọ na-esiri ike iwepụta ụdị ikpe nwere ike ịdọrọ ikpe ma ọ bụ ikekwe njide ụgha.
Adingchụpụ ihe nzuzo nke mmadụ pụtara itinye aka na ikike mmadụ ka ahapụ ya, ọtụtụ ụlọ ọrụ nchekwa na-echezi eziokwu ahụ bụ na ihe akaebe sitere na igwefoto ahụ nwere ike ime ka ọrụ ha niile dị elu. Ọ na - eme ka ụlọ ọrụ ndị a chee na ndekọ ha nwere ike itinye aka na nzuzo ma mebie iwu ụfọdụ ebe. N'ọtụtụ oge enwere mmetụta na ọbụnadị ndekọ ya n'onwe ya nwere ike bụrụ ihe dị njọ maka ikpe ahụ, dịka ọ dị, a ga-eme ya ka ọ dị njọ ma ọ bụ gosipụta adịghị ọcha. Ebe ọ bụ na ndị mmanye iwu na-ahụzi ihe dịka ihe akaebe nke nwere ike imechi ikpe ma gosipụta ihe ọ bụla onye ọ bụla kwuru na ngwa ngwa ma na-ebukwa ego ahụ.
Ndị nwe ụlọ, mana ịmara na ha anaghị enye ọzụzụ zuru oke, yabụ na ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ọkachasị mgbe ha matara na ndị ọrụ ha amachaghị oke na ike, ha na-amalite ịtụ egwu na onye na-eleda ma ọ bụ na-ezighi ezi. Enwere ike ịchọpụta ma gosipụta ihe omume ọbụna na ihe ngosi vidiyo ha. Ọ bụ otu n'ime isi ihe dị na iji igwefoto ahụ na-eyi zụọ nke ọma ma mee ihe kwesịrị ekwesị, ndia bu ezigbo okwu. Agbanyeghị, ndị isi nchekwa amatalarị na ndị nche ha agaghị eme nke ọma ebe ọ bụ na agbachaghị ha ọzụzụ maka nke a. Nke a na - abụkarị okwu na - ewute, ha na - ajụkarị ndị nche ha ka ha lelee ma kọọ akụkọ mana ha anaghị eme ihe megide ndị na - eme ihe ike, iwe, enweghị afọ ojuju ma ọ bụ na-enwe ọgwụ ọjọọ. Somefọdụ na-agadị aga agwa ndị ọrụ nchekwa ka ha were gaa n'ikiri ụkwụ ma ọ bụ kpọọ 911 mgbe ọnọdụ na - enweghị nchịkwa.
Ghọta Ihe A Ga-eme
Ọ dị ezigbo mkpa ịghọta iji ihe eji eme onyonyo nke ahụ, nke a bụ ka ị ghara inwe nsogbu n'etiti ọha na eze. Ọrụ nke ndị ọrụ nchekwa ọ bụla bụ ije ozi, ọrụ nwere ike ịbụrụ ọha na eze ma ọ bụ onye ọ bụla goro ha ọrụ. Ma ọtụtụ oge, n'ihi ụdị ọrụ enyere nchekwa dị iche iche dịka onye nche, ọrụ ndị ahịa ma ọ bụ ọbụna ihe mgbochi. Ọ dịkarịghị mkpa ịkwado ha igwefoto eyi.
Nzuzo 5211 2 Echiche Taa